Ragga, gadhka leh ama aan gadhka lahayn? - Talo Ku Saabsan Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Gar leh ama gar la '? Horeba su'aalo badan ayaa shaki la geliyay ku saabsan muuqaalka jirka ee nin. Waqtigan xaadirka ah gadhku waa qayb soo jiidasho leh oo rag badan iyo da 'kala duwan leh. Laakiin dumarku maxay u malaynayaan? Miyuu gadhku dhab ahaantii dareemayaa wanaag aad u badan oo mudan in la beddelo muuqaalkaaga?
Qaabku aad uma khuseeyo, waa inaad gadhkaaga korisaa waxaanan rajaynayaa in wax walba ay sameeyaan sixirkooda. Haddii aad si dhab ah u ogaato inaad leedahay gadh buuxa, waxay noqon doontaa wax weyn in la muujiyo sida aad uga faa'iidaysan karto xeeladaha aan kugu siin karno xidhiidhkan. Haddii ay ku saabsan tahay bixinta mugga iyo siinta daryeelka ugu fiican, annaguna dhammaanteen waan haysannaa daawooyinka ugu fiican ee kor loogu qaadayo qaybta labka ah.
1 Ragga oo gar leh ama gar leh?
2 Maxay ragga door bidaan?
3 Waa maxay sababaha kugu kalifay inaad rumaysato inaad u baahan tahay inaad gadhka xidhato?
4 Kuwa ugu faaninta badan waxay eegaan sannadkan
Ragga oo gar leh ama gar leh?
Sida laga soo xigtay sahanka, haweenka waxay door bidaan ragga gadhka leh. Shaki la’aanna, natiijadu aad bay u wanaagsan tahay, in la arki karo in ay wejiyo badan oo naga mid ah ku jiraan mawjad weyn oo mood ah. Mar dambe ma aha oo kaliya wax jir ahaaneed, laakiin waxaa la samayn karaa in la rumaysto in nin yahay waxay muujinaysaa xirfadaha taranka ee weyn iyo in laga yaabo inaad caafimaad qabto. Laakiin ka digtoonow xaqiiqadan, gadhka oo duudduuban, dhif ah, dhaadheer ama soo jiidasho leh ayaa bixin kara saamayn liddi ku ah.
Guud ahaan, dumarka keligood ah iyo kuwa la qabo ee suurtogalnimada taranku shaki la'aan waxay door bidaan ragga timaha lehama inta badan wejiga. Waxay u taagan tahay dabeecad xambaarsan, dagaal badan oo xididdo qoto dheer leh si geesinimo leh. Taa bedelkeeda, ragga xiiray ma bixin aragtidaas iyo muuqashadaas.
Dumarka nin gar leh had iyo jeer aad buu u soo jiidasho iyo ragannimo badan yahay, Xaqiiqdii waxay u muuqataa jinsi xukuma iyo ilaa hadda. Garku wuxuu si fiican u hagaajiyaa muuqaalka wajiga, waxaa u dheer nin karti u leh qariso qaab ama kaamilnimo wajiga oo gadhkiisa sii daaya. Waxay u muuqataa dumarka inay yihiin rag aad u soo jiidasho badan
Si kastaba ha ahaatee ma aha aragti isku mid ah gadh waaweyn, oo dhaadheer oo aan goglanayn. Dumarka ayaa laga yaabaa inay cabsi geliyaan iyagoo arkaya garka noocan ah, maadaama ay ku xiriirin karaan nadaafad -darro.
Maxay ragga door bidaan?
Raggu waxay doorbidaan inay isku dayaan gadhka ku beero ilaa 5-10 maalmood. Markaa waxay ogaadaan sida muuqaalka ragga oo aad u badan yahay. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan xaddiga timaha wejiga, laakiin haddii aysan si fiican u eegin dhadhankooda, waxay u baahnaan doonaan inay wejigooda xiiraan ilaa heer la baabi'iyo.
Haddii rag gar leh la dareemo soo jiidasho leh oo leh bikranimadiisa weyn, Waxay u oggolaan doonaan inay ka eegaan quruxdeeda oo dhan. Tan waxaan ku siin karnaa talada ugu fiican "sida loo helo gadh buuxaThetalooyinka ugu fiican ee lagu xanaaneeyo gadhka ". Haddii shaygaagu yahay inaad gadhkaaga daryeesho oo aad qaabaysid, adiguna halkaan ayaad joogtaa talooyinka oo dhan.
Waa maxay sababaha kugu kalifay inaad rumaysato inaad u baahan tahay inaad gadhka xidhato?
Garka oo la xidho durba waa tilmaane joogteeyo muuqaal ragannimo badan. Raggu way jecel yihiin maxaa yeelay waxay abuurtaa xoog weyn, muuqaalku waa mid aad u adag oo dabeecad leh, waana sababta ay ugu muuqdaan kuwo soo jiidasho leh. Haddii aad isbarbar dhig ku samayso rag xiiray, waxaad arki doontaa in aan la xidhin waxay u macaanaysaa wajiyadooda waxayna u muuqdaan kuwo qallafsan.
Nin gar leh wuxuu abuuraa xaalad aad u calaamadsan, wuxuu bixiyaa muuqaalka inuu ku jiro darajo sare iyo gaar ahaan haddii lagu hayo qaro weyn, dad badan iyo daryeel wanaagsan. Marka la eego xooggooda, tani waxay calaamad u tahay qaan -gaadhnimada, maaddaama ragga dhallinyarada ahi ay yihiin kuwo aan hore u lahayn gadh adag.
Dhinaca kale, ragga aan gadhka lahayn ama kuwa shaarbaduhu helaan ugxanta ugu yar, micnaheedu maaha inaan la dooran, ee waa haween ku jira goobo badan waxay door bidaan ragga gadhka leh.
Kuwa ugu faaninta badan waxay eegaan sannadkan
Stylists -ka muuqaalkan ayaa sharad ku jira muuqaal dabiici ah oo astaan ​​u ah shakhsiyadda. Ma aha su'aal ah in aad leedahay gadhka ugu fiican, laakiin fudaydkeeda waa mid la dareemi karo. Timaha waxaa la abuuri karaa maalmo yar ka dibna dulmar iyo calaamadee, ha la ogaado in la hagaajiyay.
Qaab kale oo aad gashan karto waa gadh aan lahayn dhinacyo, Waa qaab laga tegi karo oo koray oo u ekaa mid dabiici ah. Waa inaad heshaa muuqaal fudud, adigoon qoorta xiirin, laakiin taasi waxay muujineysaa inaad qaadatay daryeelkaaga maalinlaha ah ee yar. Garkaan baxdaa ayaa aad u sasabanaya wejiyada leh afar gees oo leh astaamo aad u calaamadsan.
Ha iloobin inaan leenahay wajiyo aan la tirin karin oo caan ah kuwaas oo doortay inay wejigooda xidhaan 'gadh ama gadh la'aan'. Waxaan leenahay jilaayaal sida Leonardo Di Caprio, Ashton Kutcher, Mario Casas iyo Miguel Ángel Silvestre. Ama ciyaartooyda sida David Beckham, Leo Messi ama goolhaye Iker Casillas. Haddii aad rabto inaad wax badan ka akhrido mawduucan, waad akhrin kartaa "noocyada kala duwan ee gadhka".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ragga, gadhka leh ama aan gadhka lahayn?